MY REMEMBRANCE: June 2008
ကျတော်တို့ ၀က်ပေခ်ျတွေကြည့်တဲ့အခါ တချို့ပေခ်ျ့တွေမှာ ဖွန်တော်တော်သေးတယ်။ အဲဒါကို ပြောင်းဖို့ ဆို tool ထဲကနေ ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်က ဦးမယ်။ youtube လိုမျိုးကြည်တဲ့အခါမှာလည်း video screen လေးကသေးတော့ ချဲကြည်တယ်။ တချို့စက်တွေက ချဲကြည်လို့ အဆင်ပြေပေမဲ့ ကျတော်စက်လိုမျိုးစက်တွေက ချဲ့ကြည်တဲ့အခါ ဘလက် စကရင်ပဲမြင်ရတော့တယ်။ အဲဒါကို အဆင်ပြေမဲ့ နည်းကတော ctrl ကိုနှိပ်ထားပြီး ကြွက်(mouse) ရဲ့ scroll ball လေးကို ရှေ့တို့း ကြည်ပါ။ မြင်ကွင်းကြီးလာလိုက်မယ်။ ဒါပေမဲ resolution တော့ သိပ်မကျသွားဘူး။ တချိုက ကြွက်ကို မသုံးဘူး။ touch pad ပဲသုံး တယ်ဆိုရင်တော့ ကျတော်လည်းမတက် နိုင်ဘူးနော်။
Posted by puluque at Sunday, June 22, 20080comments Links to this post
myanmar mp3 သီချင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲဖို့
ကျတော်တို့ လို အဝေးရောက်တွေအတွက် မြန်မာသီချင်းလေးတွေ နာဆင်ရတာက လည်းဖီလ်တစ်မျိုးပဲ။ အခွေဝယ်ဖို့ အနည်းငယ် အခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာ ဒေါင်းလုပ်ချဖို့ ဆိုဒ်ကောင်းကောင်း ရှိတာက အဆင်ပြေလှပါတယ်။ ကျတော် အင်တာနက်ထဲမှာ ဟိုလည်ဒီလည်ရှာရင် myanmar mp3 တွေကို ဒေါင်းလုပ်ချလိုကောင်းတဲ့ ဆိုဒ်လေးတစ်ခုတွေပါတော့တယ် .သိပြီးပြီ လားမသိဘူး။ နာမည်က http://mp3.mmblogs.net ပါ. သူမှာ မြန်မာသီချင်းတွေသာမက သီချင်းတော်တော်များများစုံပါတယ်။ သွါးရောက်ကြည်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by puluque at Saturday, June 21, 2008 1 comments Links to this post
အော် မြန်မာပြည်က ebook service ၇ယ်
ကျတော် ဒီရောက်တော့ အလွမ်းဆုံးအရာတွေက ပါပါး၊မာမီနဲ့ ....အများကြီးပဲ(ပြောပြတော့ဘူး)။ ကျတော်အကြိုက်ဆုံးအရာတွေကို ပိုလွမ်းတာပေါ။ ရန်ကုန်မှာတုန်းက ဆို monday morning တိုင်းကျတော် voice နဲ့ internet ဂျာနယ်ကို အမြဲဖတ်တယ်။ ကျန်တာတွေကို တော့ ကျတော်အိမ်ပြန်တဲ့ သောကြာနေမှပဲဖတ်တယ်။ ကျတော် အရမ်းကြိုက် လေးလဲလေးစားတဲ့ the voice weekely ဂျာနယ်ကိုတော့ အပတ်စဉ်ဖတ် ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်။ ဒီရောက်တော့ ရောက်စကတော့ ၀ယ်ဖတ်သေးတယ်။ နောက်တော့ city hall ဘက်လည်း အပတ်စဉ်မသွားဖြစ်တော့ ဘူး။ အွန်လိုင်းက နေ ၀ယ်ဖို့ ရန်ကုန်က ကျတော့ သူငယ်ချင်းအကောင်းစားလေးကို ၀ယ်ခိုင်းလိုက်တယ်(သူပဲ ပိုက်ပိုက်စိုက်ပေးတယ်)။ ပထမ အကြိမ် အွန်လိုင်းကနေ ၀ယ်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ ၅၀၀၀ ဖိုးကဒ်ဟာ ဂျာနယ် ၁စောင် ၁၀၀ ဆိုတော့ ၄၉၀၀ ကျန်တယ်။ နောက်အခါတွေ ၀ယ်တော့ ဒေါင်းလုပ်တော့ရတယ်။ ဖတ်လို့မရ။ ၄၉၀၀ ကျပ်ကလည်းမရော့။ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားသော်လည်း မရပါ။ ကျတော် လုပ်တာ မှားများနေလားလို့ ။ မေးလ်ပို့တော့လည်း အခုဆိုရင် ၂ပတ်တောင် ရှိပြီ။ အကြောင်းမပြန်။ စိတ်တော့နည်းနည်းပိန်လာတယ်။ အော်မြန်မာပြည်က ebook service ၇ယ်။
Posted by puluque at Monday, June 02, 2008 1 comments Links to this post
ကျတော် ဒီဘလော့ လေးကို ရေးချင်စိတ်မရှိဘူး။ တစ်လလောက်ရှိပြီ။ ဒီဘလောလေးကို ဘယ်သူတိုက်တွန်းချက်မှ မပါပဲ ရေးချင်လွန်းလို့ ရေးခဲ့တာပါ. ဘာကြောင့် မရေးချင်တာလည်း ဆိုတာကို တော့ မပြောပြချင်ပါဘူ။ ဒီဘလော့လေးဟာ ကျတော် ဒိုင်ယာရီလေးဖြစ်သလို ကျတော်ကြုံတွေခံစားနေ ရတာတွေကို ရေးနေတာပါ။ သူများတွေလို လဲစာကောင်းကောင်း မရေးတက်ပေမဲ ရေးနိုင်သလောက်လေး ရေးနေတာပါ။ ရေးတက်သလို ရေးနေတာပါ။ အဆင်မမှိတာတွေ ကို ရေးလို မရေးသင့်ဘူးဆိုရင်လည်း ဘယ်သူမှ ဖတ်လို့မရအောင် ပတ်စ ၀က်ပေးပြီး နေစဉ်မှတ်တမ်းလို ရေးသွားမယ်လို့စိတ်ကူးမိတယ်။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ အမှားတွေရှိပေမဲ ထပ်ခါထပ်ခါ မပြင်ချင်တာလည်း ကျတော့ အကျင့်ပဲ။ လာလည်တဲ့သူတွေကို တော့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by puluque at Monday, June 02, 20080comments Links to this post